उत्पिडित नेपाली जनताको मताधिकारको चेतनास्तर - Brizikhabar
२३ असार २०७४, शुक्रबार ०४:५५ July 7, 2017 Brizi Khabar	0 Comments
स्थानिय तहको पहिलो चरण निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । सो निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट म स्तम्भकार आफैं तनहुँ जिल्ला ऋृषिङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएको थिएँ । चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अधिकांश ठाउँमा चुनावी कार्यक्रम तथा नेपाली नागरिकसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरें । आफुलाई उम्मेदवारको रुपमा परिचित गराउने क्रममा धेरै जनतासँग भलाकुसारी भएको थियो । चुनावी अभियानमा सार्वभौम नेपाली जनताको चेतना अवस्था बुझ्ने अवसर पाएँ । सार्वभौम नेपाली नागरिकको मताधिकारको चेतनाको अवस्थालाई पाँच भागमा बर्गिकृत गरेको छु ।
१. निरपेक्ष अचेत (Absolute Unconsciousness Stage) नचिन्ने अवस्था
२०२५ साल देखि २०४० साल सम्म जति निर्वाचनहरु भए तत्कालिन अवस्थामा नेपाली जनताले पार्टी र नेताको नामै नसुनि घरगाउँको मुखिया वा बाबाआमा, काकामामा, दाईदिदीहरुले जुन चिन्ह्मा भोट हाल्न पाठाए उहि चिन्ह्मा मतदान गरे । यो चरण अधिकार र सत्ता नचिन्ने अवस्था थियो । पार्टी र नेता नचिन्ने अवस्था पनि थियो । उनिहरुलाई कुनै कुराको प्र्रलोभन देखाउन परेन उतिबेलाका उम्मेदवारहरुले । यो अवस्थाका मतदातालाई आफ्नो समुदायको अधिकारको कुनै अर्थ राखेन । तत्कालिन समयका मतदाताहरुले आफुलाई दास सम्झे । धनि, गरिब, ठूलो–सानो जात हुनु भगवानको देन सम्झे । उनिहरु आफ्नो दैनिकी घाँस दाउरा मेलापातमा मात्रै केन्द्रीत रहेको र आफ्नो जिविका गुजार्ने तर्फमात्र ध्यान गएको थियो । आफ्नो अधिकारको बारेमा कहिँकतै ध्यान जाने अवस्थै थिएन । तत्कालिन समयमा पार्टी बिहिन समय थियो । यो समयमा एक पटक बोले पछि जुन पार्टी(समुह)लाई भोट दिने भनेको छ उसैलाई दिनु पर्ने, धर्म छोड्न नहुने अवस्थाबाट हाम्रो नेपाली समाज गुज्रिरह्यो । तत्कालिन समयमा अन्तर पार्टीका मानिस बिच टकराव थिएन । एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने चलन थियो । उत्त समयमा वडा देखि केन्द्रसम्म अन्ध एकलजातिवादी सरकारको हालिमुहाली रह्यो ।
२. अल्पचेत (Less-consciousness Stage) चिन्ने अवस्था
२०४० साल देखि २०५५ साल सम्मको निर्वाचनहरुमा नेपाली नागरिकको केहि मात्रमा चेतना खुल्न थालेको थियो । यो चिन्ने वा अल्पचेतको अवस्था थियो । यो अवस्थामा नेता चिन्नु पर्ने तर अधिकार र राज्यसक्ता चिन्नु नपर्ने अवस्था रह्यो । राज्यसत्ता भनेको ख्यालै गरेन्न । कुन पार्टीको उम्मेदवार को हो? कुन चिन्ह्मा भोट हाल्नु पर्छ सो कुराको मात्र चेतना खुलेको थियो । पार्टी र उम्मेदवारको नाम अनि चुनाव चिन्ह थाहा पाए हुने अवस्था थियो । जमान र इमान छोड्न नहुने तर मतदाताले आत्मसम्मान पाउनु पर्ने, आफुलाई नेताले प्रत्यक्ष नचिने पनि आफुले चिन्नु पर्ने चेतनाको अवस्था सिर्जना भएको थियो । यतिवेलाका विभिन्न पार्टीमा लाग्ने मानिसहरुले निषेध र प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरह्यो । विरोधि पार्टीबिच एकआपसमा छरछिमेकि, इष्टनाता, गाउँ समाजसँग झै झगडा र पानी आगो बाराबार, विहेबारी बन्द अवस्था थियो । यतिबेलाका मतदाताले आफ्नो सर्वस्व गुम्दा पनि रति भर चिन्ता लिएन्न । बरु जन्म, कर्म र भाग्यको कारणले गरिबिको चरम सिकार बन्नु परेको चिन्तनको हाबि थियो । मतदातालाई ठूला पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि फौजदारी मुद्धा वा जस्तो सुकै मुद्धा लागे पनि छुटकारा पाइन्छ भन्ने भ्रम थियो । संविधान र ऐन कानुन भन्दा माथि पार्टी र पार्टी भन्दा माथि नेता हुन्छ भन्ने भ्रमको जालो थियो । यतिबेला पनि एकल जातिवादी सरकारलेनै राज गर्यो वडा देखि केन्द्रीय सरकार सम्म ।
३. अर्धचेत (Semi-consciousness Stage) लिने अवस्था
२०५५ देखि २०७० साल सम्म जति निर्वाचनहरु भए यस अवस्थामा नेपाली जनताको चेतना स्तरले पाइला चाल्न थालेको देखिन्छ । यो चरणमा जे दिए पनि लिने चरण थियो । तत्कालिन अवस्थामा पार्टी र उम्मेदवारको नाम, चुनाव चिन्ह चिनेर मात्र नपुगि क्षणिक मोजमस्ति जस्तै रक्सि, मासु, पैसा दिनु पर्ने अवस्थाको चेतना विकास भएको देखिन्छ । यो चरणमा जस्को भोज खाएको छ वा पैसा लिएको छ उसैलाई भोट दिने अवस्था रह्यो । धर्म, आत्मसम्मान, तथा प्र्रत्यक्ष व्यक्तिगत फाइदा पाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो चरणमा आउँदा अन्तरपार्टीबिच झै झगडा केहि मात्रमा कम भएको थियो । एउटा पार्टी र अर्को पार्टीबिच अर्मपर्म, लेनदेन, विहेवारी हुनै हुन्न भन्ने सोंचमा कमि आएको देखिन्थ्यो । यस समयमा गठित सरकारमा आंशिक बहुल जातिय सरकारको गन्ध आउन थालेको देखिन्छ ।
४.सचेत (Consciousness Stage) बन्ने/बनाउने अवस्था
२०७० साल देखि २०८५ सालमा भएका र हुने निर्वाचनमा नेपाली जनताको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उठ्ने छ । यो समय नेता, सिडियो, राजदुत, जिएम आदि बन्ने र सडक, विद्युत, विद्यालय, हस्पिटल बनाउने वा निर्माण गर्ने समय हो । यस अवधिमा भएका निर्वाचनमा जनताले जुन पार्टीका नेतालाई भोट हाल्ने हो सो पार्टीका नेताहरुले रक्सि, मासु, भोज, पैसा, पेट्रोल मात्र दिएर नभई सडक, विद्युत, हस्पिटल, खानेपानीको व्यवस्था तथा निर्माण गर्नु पर्ने माग राख्ने चरणमा प्रवेश गरेकोछ । जनताको आंशिक चेतनास्तर खुलेको कारणले रोजगार दिनु पर्ने माग पनि राख्न थालेका छन् । यो चरणमा टि. भि., पत्रपत्रिका, एफ. एम. रेडिया, इलोक्ट्रोनिक मिडियाले प्रमुख भुमिका खेलेको छ । चुनाव जित्नु र हार्नु मिडियाको प्रम्ख भुमिका रहेको छ । यो चरण संक्रमणकालिन चरण हो । यस चरणमा अन्तर पार्टीबिचका जनताहरु समाजिक व्यवहार, बोलीचालीनै बन्द गर्नु राम्रो होइन भन्ने चिन्तनको विकास हुँदैछ । यतिबेलाका मतदाताले आफ्नो मत खेर जान नदिने भनि ठूला पार्टीमा मतदान गरेको पाइन्छ । साना पार्टीलाई मतदान गर्दा भोट खेर जाने भन्ने भ्रमको विकास भएको छ । विशेषतस् मतदाताहरुले आत्मसम्मान र आफ्नो सामुहिक अस्तित्वको खेजीमा छन् । तसर्थ निर्वाचनमा मतदान गरेपछि आफुले मतदान गरेको पार्टीको नाम मिडियामा आउनु पर्ने चाहाना राख्छन् । यो चरण राज्यसक्ता प्राप्तिको आंशिक चेतनास्तर खुलेको तर पूर्ण रुपमा नखुलेको अवस्था हो । जनमुक्ति पार्टीको बिचारधाराको प्रत्यक्ष वा अपूत्यक्ष प्रभावले गर्दानै वर्तमान समयमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी आदि पार्टीले आंशिक रुपमा भए पनि आफ्नो पार्टी सत्ता र सरकारको सत्तामा आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलाई अवसर दिएको छ । जनमुक्ति पार्टीको स्थापना र यसले राख्दै आएको न्यायिक मागको पत्यक्ष फाइदा अन्य दलका आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, मधेशि आदिले लिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप नेपाली काँग्रेस, एमाले माओवादी पार्टीहरुबाट आदिवासि जनजाति, दलित, मधेसि, मुस्लिमहरुले उल्लेख्य मात्रमा स्थानिय निकायको निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेका छन् । यो उनिहरुको बाध्यता हो । वास्तवमै भन्दा काँग्रेस र कम्यूनिष्ट पार्टीले आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, मधेसिलाई प्रान्तिय तथा संघीय निर्वाचनमा जित्ने अवसर दिनेछ वा छैन हेर्न बाँकि छ ।
तितो सत्य त यो होकि नेपाली काँग्र्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी भित्रका आदिवासि जनजाति, मधेसि दलितले आ–आफ्नो पार्टी भित्र आफु र आफ्नो समुदाय विभेदमा परेको, सबै उत्पिडित जातिले सत्तामा प्र्रतिनिधित्व पाउनु पर्छ भन्ने आवाज राख्न सकिराख्या छैनन् । कहिँ कतै कुरा राखि हाल्यो भने कुनै अवसर गुम्ने हो वा चुनावमा टिकट नपाउने होकि वा कार्बाहिमा पर्ने हो भन्ने त्रासमा छन् । काँग्रेस र कम्यूनिष्ट पार्टीमा बस्ने उत्पिडितहरु आस र त्रासमा छन् । वर्तमान समयमा स्थानिय तहमा भए पनि अर्धबहुजातिय सरकारको अभ्यासमा देखिन्छ ।
५. अधिक सचेत (Ultra-Consciousness Stage)पुग्ने अवस्था
२०८५ साल देखि नेपाली जनता सर्वभौम हुने अधिक चेतना विकास हुनेछ । यो समय राज्यसत्ता र अवसरमा पुग्ने अवस्था हो । यो अवस्थाका नागरिकले कसैलाई कसैले शक्तिशाली सम्झने छैन र आफुलाई लघुताभाष पनि सम्झने छैन । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २०४७ साल बैशाख २३ गते देखि उद्घोष गर्दै आएको जङ्गलमा बस्ने राउटे देखि सबै जातिहरुसँग प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव , राजदुत हुने क्षमता छ भन्ने संभाव्यताको(Potentiality) खोजी(Explore) गरिनेछ । जनमुक्ति पार्टीले परिकल्पना गरेको बहुजातिय लोकतान्त्रिक समाजवाद (Multinational Democratic Socialism) लाई नेपाली नागरिकले अंगिकार तथा आत्मसाथ गर्नेछन् । जनमुक्ति पार्टीले दिशानिर्देश र दिशावोध गरेको सबै जातिय समुदायहरुको भाषा, धर्म, सँस्कार, भेषभुषा, अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार केन्द्रीकृत हुने छ । कुनै पनि उत्पिडितहरु किनारकृत र सिमान्तकृत हुने छैन्न । सबै खाले जातिय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समास्याबाट मुक्त भई सबै जातिय समुदायले स्थानिय तह देखि केन्द्रीय तहसम्म पहुँच, प्रतिनिधि, पहिचानित हुने चेतना विकास हुने छ । यो चरणमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशि सरकार स्थापनाका हुनेछ । यो समयमा पूर्ण बहुजातिय सरकारको स्थापना लागि अग्रसर हुनेछ । तसर्थ यो समयकोे जातिय समुदायले “मासु” होइन एतिहासिक “आँसु”को मोल खोज्नेछन् । “भत्ता” होइन “सत्ता” लिनेछन् । “मतदाता” होइन “नेता” बन्नेछन् । “सडक” बनाउने होइन “सदन” बनाउनेछन् । क्षणिक “अवसर” होइन दीर्घकालिन “अधिकार” प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैले अबको समय, परिस्थिति र परिवेशलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली समाज सत्ताउन्मुख राजनीति तर्फ अघि बढेको छ । यो कसैले रोकेर रोकिने वा छेकेर छेकिने अवस्था होइन । कुनै पनि जातिय समुदायले कुनै समुदायको कोख र कुलमा जन्मेकै आधारमा अपमानित र विरोध गरिने छैन । सत्तामुखि, अधिकारीमुखि , समानतामुखि तथा विभेद रहित समाज निर्माण गरि संसारको एक दिगो शान्ति र विकसित मूलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनेछ ।
← नेपालको सन्दर्भमा संघीय राष्ट्रवाद
सर्वस्वीकार्य भाषिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख →
ने.क.पा. मा ९ सदस्यीय हाइकमाण्ड
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:०५ aseem magar 0
सार ल्हेसमा सार्वजनिक बिदा दिन सर्बपक्षिय अन्तरकृया
२५ पुष २०७५, बुधबार १५:५६ Brizi Khabar 0
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार १६:३१ Brizi Khabar 0